Stanie – jEreo Ato
Auteur : Stanie
Heritaona ny nijoroan’ny My Passion, dia ampahany manokana tamin’ireo vokatra ireto fitafiana vita amin’ny lambahoany ireto. Raha mahaliana anareo ny asa tanan’i Elysa Razafindrafara dia aza misalasala mitsidika ny pejy facebook.com/mainetcoeur/.
Zava-manan’aina eo anelanelan’ny 500.000 sy iray tapitrisa ao anatin’ireo 8 tapitrisa voaisa eto amin’ny planeta, no atahorana ho lany tamingana. – GIMMICK / SIPA Pejy 1 800, mpitsabo 450 … Ity tatitra momba ny biodiversité ity dia mampanantena fa hampanaitra tokoa. Ny Alatsinainy teo, ireo manam-pahaizana ao amin’ny Firenena Mikambana momba ny zavamananaina dia mampiseho … Continuer la lecture de « Zava-manan’aina: Tokony hihetsika haingana isika »
Ny aretina kitrotro dia aretina hita manerana an’izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany. Haingana be ny fifindran’izany aretina izany amin’izao fotoana izao ary efa maro ny olona matin’ity aretina ity indrindra fa eto amintsika. Mba hanampiana antsika ary hiadiana aminy dia indreto misy fahalalàna tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro. Inona moa … Continuer la lecture de « Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro »
Misy karazany maro ny nahandro eto Madagasikara. Fa anio, ny nahandro ho atolotra antsika dia fomba tsotsotra hikarakarana ny macaroni : macaroni amin’ny sardines. Na dia sakafo avy any ivelany aza izy ity dia tsy latsa-danja amin’ny fandrahoana azy isika eto an-toerana. Ndeha ary ho jerentsika izany sakafo izany. Inona moa ny akora hampiasaintsika eto? … Continuer la lecture de « Fomba tsotsotra hikarakarana ny macaroni »
Ny vary, izay fantatsika fa foto-tsakafon’ny Malagasy dia manana ny lanjany manokana eo anivon’ny fikarakaràna sakafo eto Madagasikara. Ny sakafo malagasy etsy andaniny dia manana ny lanjany ihany koa raha mihoatra ny any amin’ny firenena hafa. Anio dia ndeha horesahana fohifohy ny mikasika ny vary sy ohatrana fikarakarana azy eo amin’ny sakafo malagasy. Ny vary … Continuer la lecture de « Ny vary eo anivon’ny sakafo malagasy »